DEG-DEG: Liverpool Oo Ugu Dambayn Bayern Munich Kala Heshiisay Thiago Alcantara & Lacagaha Uu Anfield Kaga Soo Degayo – Laacibnet.net
DEG-DEG: Liverpool Oo Ugu Dambayn Bayern Munich Kala Heshiisay Thiago Alcantara & Lacagaha Uu Anfield Kaga Soo Degayo
Kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ee Liverpool ayaa ugu dambayn horumar ka samaysay saxeexa xiddiga mustaqbalkiisa mudada dheer soo jiitamayay ee Thiago Alcantara oo ka tirsan Bayern Munich.
Sida uu sheegayo wargeyska The Athletic, Liverpool ayaa heshiis la gaadhay Bayern Munich taas oo ka dhigan in Jurgen Klopp uu gacanta kusoo dhigay bar-tilmaameedkiisii koowaad ee suuqa xagaagan.
Iyadoo ay hore labada kooxood iskugu diidanaayeen lacagta ay kala helayaan ayay ugu dambayn Bayern Munich u muuqataa mida guusha gaadhay maadaama oo ay Reds ogolaadeen inay bixitaan lacagta 30-ka Milyan ee euro ah ee ay Bavaria doonayeen.
Liverpool ayaa ogolaatay inay bixiso lacagta 30-ka Milyan ee euro ah ee ay Bayern doonaysay maadaama oo uu heshiiska dabada ka riixayay tababare Jurgen Klopp oo ku qasbay kooxdiisa inay bixiso lacagta.
Thiago ayaa saxeex cajiib ah u noqon doona Liverpool isagoo khadka dhexe ee kooxdaas kusoo kordhin doona hal-abuurkii ay mudada dheer la’aayeen tan iyo bixitaankii Philippe Coutinho.
Liverpool ayaa doonaysay saxeexyo cusub oo uu ugu horreeyo Alcantara si ay usoo xoojiyaan kooxdooda ay ku doonayaan inay ku difaacdaan horyaalka Premier League.
Thiago ayaa wacdarro kusoo dhigay Bayern Munich xilli ciyaareedkii hore kaddib markii uu kula soo guuleystay saddexleyda koobabka ah.
Bavaria ayaa doonayay in heshiis deg-deg loo gaadho kahor bilaabashada horyaalka Bundesliga ee habeenimada Jimcaha iyadoo Liverpool ay taas fulisay deg-degna u dhammaysan hawsha xiddiga.
Thiago ayaan wali heshiiska shaqsiga ah la gaadhin Liverpool balse waxa la fahamsan yahay in qaybtaasi heshiiska shaqsiga ahi aysan noqon doonin caqabad oo ay deg-deg u hirgali doonto.